Sida loo helo khibrad si loogu simo Pokémon Go | Wararka IPhone
Sida loo helo khibrad si loogu simo Pokémon Go
Caalamka weyn ee Pokémon Go mar kale. Niantic iyo Nintendo asxaabtoodu ma aysan arkin inay ku habboon yihiin inay ku daraan hage sawir leh Pokémon Go oo leh soo dejinta (waxa ay u baahan tahay xogta, mar hore ayey sidaas sameyn lahaayeen). Waxay go'aansadeen inay wax walba ugu dhaafaan gacanta isticmaaleyaasha, sidaas darteedna waxaan nahay, talobixin kadib talo, hagitaan tilmaanbixin ah, si aad si joogto ah ugulaabato Pokémon Go. Khibrada iyo nidaamka heerka ee Pokémon Go wuxuu noqon karaa mid yara yara jahwareersan marka hore, taasi waa sababta waxaan dooneynaa inaan kuu sheegno sida fudud ee aad isku barbar dhigi karto iyo ficilada ay ku siinayaan khibrad dheeraad ah ciyaarta.
Kuwani waa hababka ugu muhiimsan ee lagu helo khibrad Pokémon Go, ugu yaraan kan ugu caansan:
Iska diiwaangeli Pokémon cusub Pokédex: 500 XP
Abuur Pokémon: 500 XP
Qabso Pokémon horey uga diiwaangashanayd Pokédex: 100 XP
Ugaarso ukun kasta: 200 XP
Hel Gym: 150 XP
Aad ugu fiican tuurista Kubadda Poké: 100 XP
La dagaallama tababaraha qolka jimicsiga: 100 XP
Kaga adkaada Pokémon ka soo horjeedka qolka jimicsiga: 50 XP
Spin a PokéStop: 50 XP (mararka qaarkood waxay ku siin kartaa 100 XP)
Samee Tuur Kubadeed Weyn: 50 XP
Hel kubbadda Poké Ball ee wanaagsan: 50 XP
Tuur Kubad Poké ah oo saameyn leh: 10 XP
Waana kuwan dhibcaha khibradaha looga baahan yahay in lagu jaangooyo Pokémon Go:
18 iyo 19 - 25.000 XP
Laga soo bilaabo heerka 20 waxay bilaabmaysaa inay runtii adkaato in la simo, si kastaba ha noqotee, ma aha wax adag in la arko isticmaalayaasha heerka 20 iyo 21 mahadnaq farsamooyinka GPS been abuur ah, taas oo aan rajeyneyno in ragga Niantic ay dhowaan bilaabi doonaan inay xalliyaan, maadaama ay ka dhigayaan wax aan macquul aheyn dadka isticmaala sharciga inay helaan jimicsiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo helo khibrad si loogu simo Pokémon Go
Si kastaba ha noqotee, ma aha wax adag in la arko isticmaalayaasha heerka 20 iyo 21 mahadnaq farsamooyinka FakeGPS, oo aan rajeyneyno in ragga Niantic ay dhowaan bilaabi doonaan inay xalliyaan, maadaama ay ka dhigayaan wax aan macquul ahayn dadka isticmaala sharciga inay helaan jimicsi.
Xaqiiqda ah inaadan haysan jb kuma siineyso inaad noogu yeerto sharci darro. Haddii aad lahayd, ma ooyi doontid
Jawaab Ḿảṝiō Rōċą
Ninyahow, laga bilaabo marka aad sameyso wax ka soo horjeeda xeerarka, waa wax sharci darro ah Waxay ila fiicantahay inaad jb leedahay, aniga lafteyda marar badan ayaa igu dhacay; laakiin ruuxa ciyaarta ma ahan in lagu fadhiisto sariirta guriga.
Hadda dhaha adigoon ooyin, Mario: v
Ku jawaab Cid
Sida loo helo kiisaska iPad-ka wanaagsan oo raqiis ah
IPhone 7 Front Panel xaday: Badhan Guriga u muuqda oo ka duwan